Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Cibaado oo ka qaybgashay shirkii Jaaliyadda Edmonton oo si habsami u qabsoomay
Dr. Cibaado oo ka qaybgashay shirkii Jaaliyadda Edmonton oo si habsami u qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ June 10, 2014
Waxaa maalinimadii axada shir muhiim ah isugu yimid xubnaha jaaliyada Edmonton kaas oo bishiiba hal mar la qabto, waxaana shirka lagu furay wacdi diini ah oo uu soo jeediyey Ismaaciil C/laahi isagoo ka hadlay waajibaadka diiniga ee qof walba saaran loogana baahan yahay in uu guto. Wuxuu kula dardaaarmay in cabsida ilaahay la badiyo wanaagna la is faro xumahana laga dheeraado.
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton halgame Cabdiraage Cali, wuxuu halkaa ka soo jeediyey khudbad aad u qiimo badan oo uu kaga war bixiyey hawlihii u qabsoomay jaaliyada mudadaa bisha ah, wuxuuna aad ugu mahadceliyey xubnaha jaaliyada ee goor walba u taagan in ay fashiliyaan qorshayaasha cadowga, isagoo xubnaha shirka ka soo qayb galay ku booriyey in la dardar geliyo hawlaha jaaliyada u yaala.
Kulankan oo ahaa mid ahmiyad wayn ugu fadhiya jaaliyada waxaa lagu soo dhaweeyey isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yuusuf Ismaaciil oo si waafi ah uga warbixiyey dhamaan jaaliyadaha Soomaalida Ogaadeeniya ee ka hawl gala dalka Canada. Waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; ” Maalin walba maalinta ka danbaysa halganku wuu sii fidayaa hawshiisuna way sii balaadhanayaan, marka waxaa la inooga baahan yahay samir, dulqaad iyo adkaysi fara badan in aynu la nimaadno”,
Dhinaca kale waxaa kulankii maanta ka soo qayb galay oo warbixin aad u dheer iyo wargalin aad uqiimo badan ka soo jeediyey madax ka tirsan JWXO isla markaana ka hawl gala wadanka Canada. Waxaa kaloo fadhiday shirka jaaliyadda oo kala soo qayb gashay DR Cibaado (xoriyo) oo la wadaagtay xubnihii madasha isugu yimid warbixino aad u xiiso badan oo dhamaan xubnihii ka soo qayb galay shirka ay ku diirsadeen,kaas oo isugu jiray abaabul,xog kala qaadasho iyowacyi gelin. DR cibaado oo mudo dheer hawlo shaqo kaga maqnayd jaaliyada ayaa u bogaadisay sida hawlaha jaaliyadu u socdaan, waxayna u mahadcelisay dhamaan xubnihii shirkaa ka soo qayb galay.
Kulankan ayaa lagu soo gabagabeeyey jawi aad u heer sareeya kaa soo ay ka soo baxeen go’aamo dhaxal gal ah iyo ajandihii lagu hawl gali lahaa bilaha soo socda loona hirgalin lahaa qorshayaasha jaaliyada waxaana shirkaa soo xidhay gudoomiyah jaaliyada Edmonton.